लोकपथ संवाददाता माघ ५, २०७४ | शुक्रबार
नेपाल विद्यार्थी संघमा पछिल्लो समय विवाद झनै चुलिएको छ । झुण्ड झुण्डमा विभाजिन नेविसंघमा विभिन्न गुट र उपगुटको समानान्तर गतिविधीपनि देखिन्छ । हरेकका सार्वजनिक किसिमको गतिविधी नेविसंघलाई चलायमान बनाउने किसिमको भएपनि कुन गुटले जस लिने भन्न होडबाजी यतिवेला नेविसंघमा चलेको छ । केहीदिनअघि दुईवटा अनुसासन समितिको नाममा एकले अर्कालाई स्पष्टिकरण सोध्ने होडबाजी नै चल्यो । खासमा नेविसंघको विवादको चुरो कारण के हो ? अब नेविसंघ कसरी संगठित भएर अगाडी बढ्न सक्छ लगायतको विषयमा नेविसंघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी ःनेपाल विद्यार्थी संघमा विवाद चुलिएको छ । तपाई अनाधिकृत ढंगबाट चलेको भन्दै तपाईलाई स्पष्टिकरण सोधिएछ नी ? नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष गैरजिम्मेवार र विधानसम्मत नचल्दा विवाद भएको हो । अध्यक्ष विधान र नियमावली अनुसार चल्ने र सबै केन्द्रिय समितिका पदाधिकारी एवं केन्द्रिय समितिका साथिहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढेको भए यस्तो परिस्थिती शिर्जना हुने थिएन । ११ औँ अधिवेशन सम्मन्न भयो , अधिवेशन सम्पन्न निर्देशन समितिले सम्पन्न गर्दैगर्दा जुन जिम्मेवारी केन्द्रिय समितिलाई दिएको थियो । त्यो जिम्मेवारी १७ महिना वितिसक्दापनि मुकदर्शकमात्र भएर हामी बस्यौ । केन्द्रिय समितिको पहिलो बैठकमा हामीलाई निर्देशन समितिले ११ जिल्ला , विवादित १३ जिल्ला र जिल्ला क्याम्पसहरुमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न र समस्या समाधान गर्न जुन जिम्मेवारी दिएको थियो , त्यो हामीले अध्यक्ष ज्यूलाई पटकपटक आग्रह गर्दापनि उहाले केही गर्न चाहनुभएन । त्यसै १७ महिना वित्यो । पटकपटक संगठनलाई चलायमान र गतिशिल बनाउन आग्रह गर्यौ तर उहाले केही गर्नुभएन अझ भनौ चाहनुभएन । अध्यक्ष ज्यूले जसरी संगठनमा सबैसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो त्यो उहाले चाहनुभएन, नितान्त गुटगत रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । कोठामा समित झुण्डसँग बसेर निर्णय गर्ने, अनाधिकृत तवरबाट केन्द्रिय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य साथिहरुलाई जानकारी नै नदिई जुन कार्य गर्नुभयो , त्यसले संगठनमा विवाद शिर्जना गर्यो । हामीले पटकपटक अध्यक्ष ज्यूलाई सबैको अध्यक्ष हुनुहोस् गुट वा झुण्डको होइन भनी आग्रह गर्यौ । तर उहाले गुटगत रुपमा त अगाडी बढ्नु नै भयो अझ संगठनलाई विधान विपरित आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्यको मनोनय लगायतको काम वितान विपरित गर्दै अगाडी बढ्नुभयो । अझ हामी मौन नै बस्यौ । तर स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत नेविसंघलाई झोलामा समित गराइयो । नेविसंघलाई अझ चलायमान बनाउनको निम्ति हामीले योजना लिएर जादा उहा नीति होइन नेताको बोली र आश्वासनको पछि लाग्नुभयो । देशभरका साथीहरुको आग्रहमा संगठनको विधान र नियमावली बमोजिम चलायमान बनाउदै हामीले आफ्नो गतिविधी गर्दा अध्यक्षलाई मन परेन भन्दैमा विधान विपरित भन्न पाइन्छ र ? हामीले गरेका कुनै गतिविधी संगठनको विधान र हितभन्दा बाहिर छ भने म कारबाहीको भागिदार हुन तयार छु । नेतृत्व कम्भकर्णिय निन्द्रामा सुतेझै गर्ने अनी संगठनलाई चलायमान बनाउदा विधान विपरित गतिविधी भन्नु आफ्नो लाज छोप्न अरुलाई गिज्याउनुमात्र हो ।
अध्यक्ष समेत उपस्थित गराउन नसक्ने कस्तो किसिमको परिक्षण ? गुटगत प्रशिक्षण किन नभन्ने ? संगठनलाई गतिशिल र चलायमान बनाउन साथीहरुसँग छलफल गरेर कार्यक्रमको मिति तय गरेका हौँ । मैले अध्यक्ष ज्यू सँगपनि सल्लाह गरेको हुँ, यो उहा स्वयम्लाई थाहा छ । अझ नेविसंघको विधानमा उपाध्यक्ष प्रदेशको संयोजक रहने र सहमहामन्त्री सदस्य सचिब रहने स्पष्ट उल्लेख छ । गत पुस १५ गते विपिको मेलमिलाप दिवशको अवसरमा संगठनलाई गति दिनको लागी अनुपम फुडल्याण्डमा बानेश्वरमा पार्टीका युवा नेताहरु एवं केन्द्रिय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ , गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल लगायत नेताहरुलाई बोलाएर अब कांग्रेसलाई गति दिनुपर्छ , नेविसंघलाई शसक्त बनाउनुपर्छ भनेर वृहत अभियानको प्रारम्भ गर्यौ । अध्यक्ष ज्यूले प्रसंशा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । तर उल्टो प्रसंसा होइन अध्यक्ष ज्यूले तथाकथित स्पष्टिकरणको दण्डा तेस्र्याउनुभयो । यस्तै प्रदेश समितिका साथीहरुसँग छलफल गरेर प्रदेश स्तरिय प्रशिक्षण भर्खरै माघ ३ गते धादिङ जिल्लाको धादिङवेसीमा सम्पन्न भएको छ । यो पशिक्षण गर्ने कुरापनि उहासँग भएकै हो । प्रशिक्षणमा कांग्रेसका प्रभाबशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसीको प्रमुख आतिथ्य तथा चन्द्र भण्डारीको विशेष आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ । प्रशिक्षण राखेर नेविसंघ शसक्त, बलियो र चलायमान बनाउन नपाउने ? म अध्यक्ष ज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधीसभा निर्वाचनको परिणाम नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जसरी आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेन । कांग्रेसका भातृ सस्थाहरु जसरी बलियो हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको कारण अपेक्षाकृत परिणाम नआएको सत्य छर्लङ छ । नेविसंघ कांग्रेसको नर्सरी हो, हामी नेविसंघलाई बलियो र शसक्त बनाउन चाहन्छौ । अनी बल्ल कांग्रेस बलियो हुन्छ, कांग्रेस बलियो भएमात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । हाम्रा परिक्षण कार्यक्रमहरु अन्य प्रदेशहरुमा पनि अगाडी बढ्दै जान्छ अब रोकिन्न । प्रदेश समितिका साथीहरुसँग सरसल्लाह र छलफल गरेर जिल्लास्तरिय र क्याम्पसस्तरीय संगठन पुनजागरण अभियान हामीले सञ्चालन गर्र्दैछौ । म सम्पूर्ण साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु संगठन सुदृधिकरण अभियान अब रोकिन्न । अभियानमा लाग्ने साथीहरुमाथी कसैले विधान विपरित चल्यो भन्छ भने साथीहरुसँगै मपनि कारबाही भोग्न तयार छु ।
तपाईले आफ्नै नेतृत्वमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ , खासमा यस्ता कार्यक्रम गर्नको लागी विद्यार्थीले स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् ? बास्तवमा अत्यन्तै राम्रो र गर्भिलो प्रश्न गर्नुभयो । साच्चै कार्यक्रम गर्दा अत्यन्तै गाह्रो र विभिन्न कठिनाई आइपर्छ । यसलाई सहज र सम्पन्न गर्न संगठनलाई माया गर्ने शुभचिन्तक , साहयोगी साथीहरुसँगको समन्वयमा सहयोग लिएर हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौ ।
झुण्ड झुण्डमा विभाजित नेविसंघलाई अब कसरी चलायमान र संगठित बनाउन सकिन्छ ? लामो समय भयो नेविसंघको केन्द्रिय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । म अझैपनि अध्यक्ष ज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । तपाई हामी सबैको साझा अध्यक्ष हो , गुटगत संकिर्णतालाई छाडिदिनुहोस् । केन्द्रिय समितिका पदाधिकारी, केन्द्रिय सदस्य एवं अन्य महत्वपूर्ण साथिहरुसँग राय छलफल गरेर अगाडी बढ्न अध्यक्ष ज्यूलाई आग्रह गर्दछु । मेरो लक्ष्य संगठनलाई आच पुर्याउने होइन केबल गतिशिल र चलायमान संगठन निर्माण ने हो ।
'आन्दोलन गर्नु नै अपराध बढाउनु हो'
ओलीलाई भेट्न खोज्दै कांग्रेस नेता पौडेल, किन तर्किदैछन् प्रधानमन्त्री ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली...
प्रदेश २ झापड काण्ड: निजामती कर्मचारीद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक
जनकपुर । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्...
वाइडबडी प्रकरणमा गम्भीर छानविन गर्न कांग्रेसको माग, अनियमिततामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा गम्भीर र...
भूकम्पपछि बनेका भूकम्पपीडितका घरलाई मापदण्ड पूरा भएको मानी अनुदान दिने
काठमाडौं । भूकम्पपछि बनेका भूकम्पपीडितका घरलाई मापदण्ड पूरा भएको मानी अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ । आ...
मन्त्रीको कुटाई खाएका सचिव विरामी, अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झा अस्पताल भर्ना भएका छन्...